Ny vidin’ny fatorana sy ny vokatra: fantatrao ny fifandraisana
Raha toa ka niantsona teo ity lahatsoratra ity volana na taona taorian’ny famoahana, dia tsy ho afa-tena. Izay ianao dia Maka fatorana folo taona izay dia voalaza ary ho voampanga isan-taona mahaliana. Izany dia midika fa na oviana na nomena fotoana, ny fanatanterahana ny tsena ho an’ny fiarovana amin’ny loza toy izany koa sy ny faharetany. Tsara, tena tsotra, eny an-tsena, ny mpampiasa vola dia afaka mividy foana ny anaram-boninahitra, ny folo-taona dia mandoa isan-taona. Mazava ho azy, toy izany koa ny fiarovana amin’ny mivezivezy, tsy misy te-hividy izany fatorana mandritra ny folo taona, mandoa liana hividy izany dia ilaina ny vidiny handao sy ny marina dia tokony mampilatsaka. Ao amin’io vidiny io, ny fitadiavam-bola mahaliana, dia ny zava-bitany, izany hoe ny an-tsena.
Ao ny raharaha, ohatra, raha toa an-tsena ny tahan’ny any, dia hisy ny fangatahana toy izany ny antitra fatorana, izay mandoa isan-taona ny tombontsoa ary ny vola dia tonga. Raha mijery ny kajikajy, mitombo ny isa roa ny taham, mahatonga ny rano indray mitete avy, eo amin’ny decennial, raha ny hampihena ny isa roa dia mitarika ho amin’ny fiakaran’ny saika ny, Dia, mahakasika teboka tsirairay fiovana dia mandihy, hevitra ny fanitsiana na hampitombo ny vidiny. Rehefa ny tahan’ny fiakaran’ny, tsara indrindra safidy dia tsy maintsy fatorana amin’ny maturities ela loatra noho ny vidiny dia natao ho marina ihany raha toa ny fiakaran’ny tahan’ny zanabola. Ohatra, raha ny fatorana izay mandoa liana isan-taona izany ny taona fa tsy, ny hampitombo ny points-ny fifanarahana mety hitondra any amin’ny manan-danja ny rano indray mitete amin’ny vidiny avy any.
Tsy ny hevitra ny fanitsiana manohitra ny mihoatra ny folo taona
toa ny mahazo eny amin’ny maharitra fiarovana. Tsara kokoa, avy eo, ny tia fohy maturities sy mitsinkafona tahan’ny fiarovana, satria ny Omby Tsena ao amin ny fatorana mety ho vita. Raha toa ka niantsona teo ity lahatsoratra ity volana na taona taorian’ny famoahana, dia tsy ho afa-tena. Inona ianao Amin’izany toerana mampiasa cookies mba hahazoana antoka tsara kokoa ny traikefa eo amin’ny toerana.
Chat tsy misy fisoratana anarana →